Ma Run baa in Hub lagala baxsaday wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ma Run baa in Hub lagala baxsaday wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya
Ma Run baa in Hub lagala baxsaday wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya
Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si Kulul u beeniyay warar la isla dhexmarayay oo ku aadan in hub lagala baxsaday Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Taliska Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliska ayaa sheegay in wararka la baahiyay ay yihiin been abuur, islamarkaana dadka baahiyay in hub lagala baxsaday xarunta Wasaaradda ay yihiin kuwa kasoo horjeedo Dowladdnimadda.
Ku-simaha Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka ahna Taliye kuxigeenka Gen. Maxamed Cali Bariise, oo qoraal soo dhigay bartiisa bulshadda ayaa wararkaas ku tilmaamay kuwa been abuur ah.
“Waxaan halkan ku caddeynayaa in ay been aan sal iyo raad toona laheyn ay tahay wararka sheegaya in hub lagala baxasaday Wasaaradda Gaashandhigga iyo Taliska XDS. Waa been lagu marin haabaabinayo Ra’yi caamka ah ee dadweynaha oo ay hurinayaan cadowga umadda Soomaaliyeed,waxaan umadda ugu bishaareyneynaa in CXDS yahay astaan u taagan ilaalinta kaaramada, qiyamka iyo midnimada umadda Soomaliyeed isaga oo marnaba aan ka leex leexan baabi’inta iyo cirib tirka cadowga”, ayuu yiri Gen. Bariise.
Hub lagala baxsaday wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya
taliska xoogga dalka